Archive du 11-mai-2022
Andry Rajoelina Misy mampijabaka sa tena tsy mahay… ?
Maro no manomboka velom-panontaniana ankehitriny : fa inona marina no tena mahazo azy ao an-dapa ao ? Misy mampijabaka sa inona no tena antony mahatonga ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny matetika mandray
Ny resaka hoe fanorenana sekoly, hopitaly, tetezana, lalana dia efa aza andavanandro tsy maintsy sahanin’ny
fitondram-panjakana to any hoe fitandroana ny filaminana, fametrahana fandriampahalemana sy fiarovana ny sisin-tany.
Mikatona ny fomba fijery. Mikatona ny fomba fiasa. Mikatona ny fomba fanaovana serasera. Mikatona ihany koa ireo sehatra henoina ary tsy mahagaga raha toa ka mikatona manaraka izany rehetra izany amin’izao fotoana izao ny lalana mankany amin’ny tena fampandrosoana.
Andilamena Voatsatok’antsy ary tsy nisy maso intsony ilay ramatoa
Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any Antanambaovao distrikan'Andilamena. Ramatoa iray no maty nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana ny faran’ny herinandro teo tany an-toerana.
Lozam-pifamoivozana tany Bealanana Im-polo nivadika vao lasa tanaty hantsana ilay fiarabe
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tany Bealanana omaly folakandro. Fiara lehibe iray no nianjera tany anaty hantsana ‚ teo amin’ny fiakarana ( dilana ) hiazo an’i Marolambo ‚
Fanarenana ny toekarena Nampaneno lakolosy ny Banky iraisam-pirenena
Miandry ireo soso-kevitra avy amin’ny Malagasy mba hahafahana manarina haingana ny toekarena ny Banky iraisam-pirenena, izay eo anilan’i Madagasikara hatrany amin’ny resaka asa fampandrosoana.
Hetsiky ny 13 mey 1972 “Mbola tokony hitohy ny tolona hatramin’izao”
Ho fanomezam-boninahitra ny filohan’izy ireo no sady ho fampahafantarana ny fisian’ny hetsika makotrokotroka hanamarihana ny jobily volamenan’ny tolon’ny 13 mey 1972 ihany koa dia nampahafantarina tetsy amin’ny
Fahasahiranana andavanandro Maro ireo midi-trosa rehefa mitsabo tena
Maro ireo mpitsabo velon-taraina amin’izao. Mitombo isa hatrany mantsy ireo marary mila fitsaboana manao tonga trosa. Hafa mihitsy ny zava-nitranga tamin’ny 3 taona lasa hoy ny mpitsabo iray.
Dr Marius Ramaroson “Mety hankarary an-doha koa ny fahapotehan’ny atmosfera”
Tokony hiara-kiasa ny sehatra tsy miankina sy miankina amin’ny fanjakana amin’ny fijerena ny firongatra marina na tsia ny COVID 19 indray, hoy ny mpitantana ny klinika Saint Thomas Faravohitra, Dr Marius Ramaroson.
Faha 50 taonan’ny tolona 1972 Tsiaro fa tsy fankalazana ny eny Antaninarenina
Mandritry ny 3 andro dia ny 10 hatramin’ny 12 mey izao no hanatontosana etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina ny Tsiaro ny faha 50 taonan’ny tolona 1972. “Tanora mahatsangy, manoratra tantara…”,
Mpilalao sarimihetsika Andrianina Ravel Hanohana ny famokarana fitafy Malagasy
Nisafidy ny hanohana sy hisehatra amin’ny filatroana sy famokarana fitafy malagasy ny mpilalao sarimihetsika Andrianina Ravel.
Asam-panjakana ambony “Omeo lanja ireo teknisianina nianatra!”
Tsy hanaiky atao fitaovana politika intsony ny mpiasam-panjakana ambony, hoy ny fanambaran’ny federasionin’ny sendikan’ireo mpiasam-panjakana ambony na “Federation des Syndicats des Grands corps de l'Etat” tetsy amin’ny Le Pave Antaninarenina omaly.
Mpitatitra Misy miziriziry hampiakatra saran-dalana ihany
Tongotra mby an-dakana ho an’ireo mpitatitra eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny fampiakarana saran-dalana.
Ady amin’ny tsy fananan’asa Miezaka manofana ireo tanora ao aminy ny kaominina Talatamaty
Mitombo isa hatrany ireo tanora tsy an’asa eto amintsika. Ankoatra ireo nahavita fianarana nefa tsy mahita asa mifandraika amin’ny lalam-piofanana nianarany dia misy ihany koa ireo niangaran’ny vintana ka tsy afaka nandia ny
Faritr’Isoraka Mitombo isa ireo 4’mis mipetraka amoron-dalana
Mihabetsaka ireo vahoaka sahirana eto amintsika. Tsy vitsy ireo tsy mahaloa hofantrano intsony, antony mampitombo isa ireo 4’mis tsy manan-kialofana mipetraka amin’ny trano sachet plastika eny rehetra eny.
Nogadraina noho ny resaka facebook Nivoaka ny fonja omaly i Jeannot Randriamanana
Nivoaka omaly talata 10 mey rehefa naiditra am-ponja ny 10 martsa lasa teo Jeannot Randriamanana. Raha tsiahivina dia ity lehilahy iray no namoaka fanehoan-kevitra tamin’ny tambazotran-tserasera facebook mikasika ilay
Antoko politika Fiombonana “Tsy miankina amin’ny krizy any Okrainina ny fiainantsika”
Tsy miankina amin’ny krizy ao Okrainina ny fiainantsika eto Madagasikara, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Fiombonana.
Fanjakana be resaka Mihirahira ho nanombok’asa no sady mipropagandy ihany
Natomboka omaly 10 mey ny asa fanamboarana sy ny fanavaozana ny tetezan’Antsampazana sy ny tetezan’i Mangoro eo amin’ny lalam-pirenena faha 2.
Depiote Brunelle Nahavita tolo-dalàna famerana ny vola ampiasain’ireo kandida
Tsara kokoa raha mitovy ny herijikan’ireo kandida filoham-pirenena eto amintsika ka izany no antony nandrafetana ny tolo-dalàna entina hamerana ny vola ampiasan’ny kandida tsirairay avy manddritra ny Propagandy.
Durlin Retogniane “Mandohalika ny fizahantany ka tokony hifantohan’ny fitondrana”
Ilaina ankehitriny, hoy ny manam-pahaizana momba ny fizahantany, Durlin Retogniane, ny manarina ny fizahantany anatiny satria vao afaka krizy isika dia sarotra ny hanome tolotra avy hatrany ireo mpizahatany avy any ivelany fa
Lozam-pifamoivoizana Misy fampianarana sy fanentanana goavana mila atao
Moto miisa 4 tamin'ny 5 tao anatin'ny herinandron'ny 2 hatramin'ny 8 mey no nahafatesana olona hoy ny borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana na “Brigade des Accidents”.
Olona efa nahazoazo taona Tsy tokony avela mitondra fiara irery intsony
Efa tafiditra ao anatin’ny olona marefo ny zokiolona. Raha vantany vao mihoatra ny 60 taona izy ireny dia efa tokony hisy fanaraha-maso manokana indrindra raha vantany vao mivoaka ny trano.
Voka-dratsin’ny rivodoza Nihena ny voka-bary safiotra
Nihena tsy toy ny mahazatra isan-taona ihany koa ny vokatra vary safiotra na “riz hybride” ho an’ity taona 2022 ity.
Alasora Nisy nanapoaka afomanga tsy nahazoana alalana
Nisy afomanga nipoapoaka fatratra tao amin’ny kaominina Alasora ny sabotsy 07 mey alina lasa teo. Tao amin’ny efitrano fandraisan-danonana Hahitantsoa no nitrangan’izany izay niteraka fahatairana sy tebiteby ho an'ny mponina
Ambohibao Antehiroka Ny Colas no hanamboatra ireo lalan-kely
Tena azo hanina tokoa ny lalana satria miantoka fampandrosoana ao anatin’ny faritra iray misy azy. Miroso amin’izany ny kaominina Ambohibao Antehiroka, distrikan’Ambohidratrimo.
TENY GASY Ny tanimbarin’Ingahandriana Ramiarinjatovo, 6 t/ha
Folo taona lasa izay, nitantara Itompokolahy Jean-Pierre Domenichini, nahafantatra izany Ingahandriana Ramiarinjatovo izany.